"Jalmad shaah ah iyo bakeeriyo deyn ah ayaan ku billaabay maantana waxaan leeyahay hanti badan" - BBC News Somali
"Jalmad shaah ah iyo bakeeriyo deyn ah ayaan ku billaabay maantana waxaan leeyahay hanti badan"
Hooyo Xaliima-sacda Macallin Cabdinuur, waa haweeney Soomaali ah oo meherad ganacsi ku leh magaalada Qabridahare ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya, waxayna soo martay marxalado kala duwan, walina way sii wadaa howsheeda.
Waxay laanta Afsoomaaliya ee BBC-da uga warrantay sheekada cajiibka ah ee ku saabsan halkii ay markii ugu horreysay ka billowday ganacsigeeda aysanna dad badan ku dhiirranin, ayna adagtahay in laga macaasho.
"11 sano kahor, ganacsigan waxaan ka billaabay shaah karin, markaasna waxaan heystay 7 carruur ah, falaasyada, gambadhada iyo bakeeriyaashaba waan soo amaahday, maalinkaan shaqada billaabayay, waxaanadagay meel kiro ah", ayey tiri Xaliima-Sacda.
"Hadda dadka ay noloshooda igu tiirsan tahay waxay marayaan 20 ruux, qaar anigaa dhalay qaarna iyagaa sii dhalay, kuwo kalena waa ehelka xaafadeyda ku nool ee wax barta, wax walba oo ku baxa dadkaas waxaan ka maareeyaa meheradeyda".
"Intaas waa biilka reerka, waxaa kale oo aan ganacsigan ka dhistay guryo shan qol ah, illaa iyo haddana ganacsiga halkiisii ayaan kasii wadayaa. Shaahii baan kariyaa cabitaanno kalena waan ku dhex wadaa, lacagta aan isticmaalo mooyee inta kale waxaan kusii galaa hagbad, si aan ugu fuliyo howlaheyga kale".
Dumarka ganacsatada ah ee magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa ragga kula tartamaya ka
'Waxaan rabaa inaan soo xajiyo'
"Ciyaalkii way ii koreen, hadda wixii ka dambeeya waxaan rabaa inaan ku cibaadeysto xooggeyga, inaan xaramka ku aado, waxaanna doonayaa inaan hadda sii aruursado kharashkii aan xajka ku aadi lahaa", ayey tiri, iyadoo ay kalsooni weyn ka muuqatay.
Mar ay arrintaas ka hadleysay ayey sheegtay: "Wax aniga reerkeyga dhankooda iga soo galay iyo wax ciyaalkeyga xaggooda iga soo galay midna ma jiro, kirligaas oo aan ku shaqeystay, xooggeyga oo aan aaminay iyo Ilaah oo aan talo saartay ayaan heerkan ku gaaray".
Isu dheelitirka ganacsiga iyo hawsha guriga ee dumarka
Laakiin sannadihii hore ee ganacsigeeda xaalku sidaas wuu ka duwanaa, waxayna tiri: "shan sano oo ka mid ah 11-kaa sano ee aan ganacsiga ku jiray, waxaan dagganaa goob kiro ah, laakiin markii dambe aniga ayaa gurigeyga dhistay wuxuuna ii noqday meel istiraatiiji ah oo ay dadkoo dhan jecel yihiin".